🥇 ▷ Android 10 Q: Isticmaalayaashu ma jecla wax badan oo tilmaam ah ✅
Android 10 Q: Isticmaalayaashu ma jecla wax badan oo tilmaam ah
Android 10 Q wuxuu isku dayi doonaa inuu ku soo rogo xajmiga tilmaamida isticmaalayaasha. Google wuxuu sharraxayaa in ay ka waxtar badan karto sedex badhanka bar-tilmaameedka iyo in codsiyada soo bandhigi karaan waxyaabo badan. Laakiin qaadashadeeda waa adag tahay qaarna waxay door bidayaan inay ku noqdaan qaabkii hore.
In kasta oo Google ay isku diyaarineyso inay soo saarto nooca ugu dambeeya ee Android 10 Q (beta 6, kii ugu dambeeyay, ee hadda la sii daayay), shirkadda Mountain View waxay bixisaa dib-u-eegis bilaha tijaabadan. Waxay ku xirnaataa gaar ahaan qoraal blog ah oo gabi ahaanba ka go’an dhaqdhaqaaqyada muuqaalka, waa muuqaalka ay u badan tahay inuu diiradda saarayo wararka ugu muhiimsan nooca cusub ee Android.
Android 10 Q: duulimaadka ayaa ka hufan tilmaammada dhaqdhaqaaqa marka loo eego garabka marka loo eego Google
Google ayaa u kuurgal ah: marka loo eego falanqayntiisa, duulista tilmaamtu waxay ka waxtar badan tahay qaabab kale, sida barta taraafikada ee leh saddex badhan. Waxay u oggolaaneysaa inay xawaare ku dheehan tahay iyo sidoo kale inay muujiso waxyaabo badan oo shaashadda ah. Allen Huang iyo Rohan Shahbref, oo ah maareeyayaasha wax soo saarka ee mas’uulka ka ah barnaamijka is dhexgalka ee Android ayaa yiri “anagoo u guurineyna qaab dhismeedka taranka jirka ee nidaamka wadooyinka, waxaan bixin karnaa boos badan oo loogu talagalay codsiyada si awood loogu yeesho khibrad dheeri ah.” Marka la soo koobo, faa iidooyinkaas. Laakiin qaadashadeeda waa adag tahay.
Google ayaa qirtay in qaar ka mid ah isticmaaleyaashu ay door bideen inay ku soo laabtaan bar-baaraha hore ee wanaagsan ee saddexda badhan, ayna awoodin inay la qabsadaan tilmaammadaas. Waxaa intaa dheer, haddii jihada tilmaanta ah laguugu soo bandhigi doono sida tooska ah ee loo yaqaan ‘Android Stock’ oo leh casriyeynta ugu weyn ee soo socota, safar ku aaddan goobaha ayaa beddeli doona arrintaas. Shirkadda Mountain View waxay sharrax ka bixinaysaa, si kastaba ha noqotee, ka dib markii muddo ka-haqab-tirka ah oo u dhexeysa 1 illaa 3 maalmood, inbadan oo adeegsadayaashu ay ku guuleystaan ​​inay si toos ah u isticmaalaan dhaqdhaqaaqyada isla markaana aan hadda qalad laga gaarin.
Sidoo kale akhri: Android 10 Q: Liistada taleefannada casriga ah ee iswaafaqsan
Waxay kaloo sheegtay inay isku dayday inay la jaan qaado soosaarayaasha waaweyn ee bixiya astaantan muuqaalkooda si qof walba uu u siiyo ku dhawaad ​​nidaam isku mid ah oo tilmaam ah, hadafku maahan inuu lumiyo macaamiisha leh marin kale oo mar kasta oo ay beddelaan astaanta casriga ah. Adiguna, miyaad door bidaysaa tilmaam ama tilmaam badan?
Xigasho: Blogga Kusoo Bixinta Blog